Baarlamaanka Puntland oo diyaarinaya mooshin ka dhan ah madaxweyne ku xigeenka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo diyaarinaya mooshin ka dhan ah madaxweyne ku xigeenka
December 27, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowladda Puntland ayaa diyaarinaya mooshin ka dhan ah madaxweyne ku xigeenka Cabdixakiim Cumar Camay si ay xilka uga qaadaan, iyaga oo ku eedeeyay dastuurka inuu ka xadgudbay, sida uu sheegay xildhibaan.
Xildhibaan kamid ah baarlamaanka Puntland oo codsaday in aan magaciisa la sheegin ayaa warsidaha Puntland Mirror u xaqiijiyay in ay diyaarinayaan mooshin ka dhan ah madaxweyne ku xigeenka.
“Waxaanu diyaarinaynaa mooshin ka dhan ah Camay, maxaa yeelay waxaa uu jabiyay dastuurka dalka u yaala kadib markii uu heshiis la galay siyaasiyiin kasoo jeeda maamulka Somaliland intii uu Muqdisho booqashada ku joogay.” Xildhibaanka ayaa sidaa u sheegay Puntland Mirror.
Ma jirto ilaa iyo hadda jawaab kasoo baxday madaxweyne ku xigeenka oo ku aadan mooshinka ka dhanka ah isaga.
Ugu yaraan 34 xildhibaan waa in ay saxiixaan mooshinka si loo horkeeyo baarlamaanka dhexdiisa, marka loo fiirsho dastuurka Puntland. Si xilka looga qaado madaxweyne ku xigeenka sadeex meelood labo meel oo xubnaha baarlamaanka ah ayaa loo baahanyahay in ay u codeeyaan mooshinka ka dhanka ah madaxweyne ku xigeenka.